Zvinokwanisika here kuvaka backlinks zvisingaperi?
Kana uri kuverenga nyaya ino, saka iwe unogona kunge uchida kuwedzera magwara kune web yako source, blog, article, uye zvimwe. Nyaya iyi yakanyatsorongedzerwa kune avo vanoda kuzowana backlinks zvisingaperi pasina kushandisa chero zana. Zvisinei, iwe unofanirwa kuziva kuti kuwana PR yakakura shure kumashure, zvinotora kushivirira uye kushanda zvakaoma. Kana iwe ukwanisa kuwana zvakakosha uye yakakwirira PR kumashure pasina chero kushanda, saka iwe haungadi chinhu ichi chinyorwa, iwe iwe?
Ngatitange titaure mamwe mashoko pamusoro pezvokudzokera shure uye kukosha kwekuzvarwa kwemigwagwa. Kazhinji kutaura, backlinks ndizvo zvinoitika apo imwe nzvimbo yewebhu inobatanidza kune imwe. Inoshanda zvakajeka. Chokutanga, Google bots inotarisa nzvimbo inobva kuiswa chikwata chinowanikwa. Vanoongorora kukosha uye hutano hwehuwandu hunobva pane ino. Uyezve, kutsvaga injini kunongedza kune webhusaiti PageAuthority uye PageRank pamwe chete nemari uye unhu hwekufamba. Kana imwe tsvakurudzo yapera, tsvaga tsvakurudzo dzichikurumidza kutarisa webhutori yakabatana kuti ione kuti kubatana kwakakosha uye kwakavimbika. Achifunga izvi data, Google inoita nhamba kuti iwedzere yakabatana nehuwandu hwehuwandu hwemashoko panguva inotevera inenge ichikomberedza.
Ndicho chikonzero zvimwezve shure zvinoreva marwagwa akawanda uye zvakare nzvimbo yakakwirira yewebsite. Mumazwi ayo motokari zvinoreva vashandi vatsva vachaunza mari kune bhizinesi renyu rekuInternet. Saka, tinogona kutaura kuti backlinks inokutora mari uye yakadzoka mukutsvaga.
Zvine musoro here kutenga backlinks zvisingaperi?
Vazhinji vema webmasters vanosarudza kutenga backlinks kuti ikurumidze kushandiswa kwekugadzirwa kwechigadzirwa. Zvisinei, iwe unofanirwa kuva nyanzvi mauri kuti utenge zvakanyatsokonzera kumashure ayo anogona kuunza kukosha pawebsite yako. Kana zvisina kudaro, haugoni kudzoka kana kutowedzera zvinhu.
Kune dzakawanda zvenyanzvi dzeUNO dzehutsotsi pawebhu dzinopikira kuvaka zvinzi "PR PR" kana "high value" backlinks. Kutenga mabhizimisi akadaro, iwe unongotora mari yako. Nokuti kunyange kana backlinks ichibva kune web source ine yakakwirira yepamusoro pepamusoro, hazvirevi chinhu kana zvisingabatsiri pawebsite yako. Uyezve, Google inogona kuona nyore nyore zvigadzirwa zvakatengwa uye inoronga zvose mutengi uye mutengesi.
Hapana mubvunzo kuti mamwe emasangano acho achawana hukama hwako kubva kune hukuru hwepamusoro. Vanogona kuvaka zvikomborero zvakawanda kune yako sezvaunogona kubhadhara. Zvisinei, kune chimwe chinhu chinonakidza, pakarepo paunomira kubhadhara mabasa avo, hukama hwakagadzirirwa nzvimbo yako huchabviswa. Ndicho chikonzero chakabhadhara backlinks haisi iyo nzira yakanakisisa yekuwana migwagwa kubva kune injini yekutsvaga.
Ndeipi imwe nzira dzokuti uwane hukama husingaperi?
Unogona kuvaka backlink pane iwe pachako, shandisa hukama hwemabhizimisi akanaka nehutano hwehutano hwewebhu. Kana kana iwe wakurumidza iwe unogona kubhadhara vashandi venguva yakazara veSEO kuti vavake backlinks nzira yakarurama. Zvichakupa mari yakawanda pane idzi dzakasununguka shure kwaunogona kutarisa pane dzimwe nzvimbo, asi dzichachengeta iwe webhusaiti yako papeji yekutanga yeSERP kwenguva yakareba Source .